Bogga ugu weyn Dib-u-eegida Amaahda Shakhsi ahaaneed ee Dawladda Dhexe ee Badda: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Midowga Deynta Ciidamada Badda ayaa malaayiin xubnood oo adduunka oo dhan ah ku leh. Xubno ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Maraykanka, mujaahidiinta millatariga, shaqaalaha wasaaradda gaashaandhigga, iyo xubnaha qoyskooda ee dhow ayaa ururka ka kooban.
Amaahda shakhsi ahaaneed waxay ka mid yihiin adeegyada bangiyada ee ay bixiso ururka deyntu. Waxay bixisaa deymo sugan oo aan la hubin, oo leh shuruudo dib-u-celin ah oo lagu qeexay ujeedada deynta iyo taariikhda deynta amaahiyaha.
Haddii aad codsato deyn oo laguu oggolaado, waxaad heli kartaa lacagta isla hal maalin, samaynta Amaahda Shakhsi ahaaneed ee Navy Federal doorasho caqli gal ah haddii aad si degdeg ah lacag ugu baahan tahay.
Waa maxay Ururka Deynta Federaalka ee Badda?
Sida Laga Helo Shaqada Amaahda Shakhsiyeed ee Ciidanka Badda
Faa'iidooyinka Amaahda Gaarka ah ee Ciidamada Badda ee Federaalka
Dib-u-dhacyada Amaahda Gaarka ah ee Ciidamada Badda ee Federaalka
Astaamaha Amaahda Gaarka ah ee Ciidamada Badda ee Federaalka
Soo gudbinta wadajirka ah
Sida Looga Helo Amaah Shakhsiyeed Ururka Deynta Federaalka ee Badda
Shuruudaha Dhibcaha Dhibcaha
Saxiixayaasha iyo la-amaahiyeyaasha waa laba nooc oo dad ah oo kaa caawin kara inaad hesho deyn.
Midowga Deynta Federaalka ee Navy ma yahay hay'ad maaliyadeed oo lagu kalsoonaan karo?
Sida Amaahda Gaarka ah ee Ciidamada Badda ee Federaalka ay u urursan yihiin
USAA vs. Amaahda Gaarka ah ee Dawlada Dhexe ee Badda
PenFed vs. Amaahda Gaarka ah ee Dawlada Dhexe ee Badda
SoFi vs. Amaahda Gaarka ah ee Ciidamada Badda
Waa maxay Dhibcaha Dhibcaha ee aad uga baahan tahay Amaahda Gaarka ah ee Ciidanka Badda Federaalka?
FAQs ee Dib u Eegista Amaahda Gaarka ah ee Dawlada Dhexe ee Badda: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Navy Federal Credit Union ma tahay shirkad dhab ah?
Miyay adag tahay in dayn shakhsi laga helo ururka deymaha?
Suurtagal ma tahay in laga helo deyn shakhsi ah oo laga helo ururka deymaha?
Waa imisa xadiga ugu badan ee aad ka amaahan karto ururka daynta?
Navy Federal ma yahay meel wanaagsan oo dib loogu maalgeliyo amaahda shakhsi ahaaneed?
Macluumaad noocee ah ayaad u baahan doontaa si aad u codsato amaahda gaarka ah ee Navy Federal?
Waa ayo Ururka Deynta Federaalka ee Badda ee ugu Wanaagsan?
Ururka Deynta Federaalka ee Navy, oo xaruntiisu tahay Vienna, Virginia, ayaa taageeraysay beesha millatariga tan iyo 1933kii.
Amaahiyaha ayaa si weyn u balaariyay, isagoo hadda u adeegaya in ka badan 8 milyan oo macaamiil ah. Waxay bixiyaan wax walba laga bilaabo hubinta iyo xisaabaadka kaydka ilaa deymaha iyo kaararka deynta.
La yaab maaha in NFCU ay tahay ururka deymaha ee ugu weyn adduunka, oo leh in ka badan 343 goobood oo adduunka oo dhan ah. Waxay aaminsan yihiin waaritaanka waxayna ku muujiyaan qaab-dhismeedyada tamarta waxtarka leh iyo isticmaalka boqollaal tan oo agab dib loo warshadayn karo.
Midowga Deynta Federaalka ee Navy wuxuu bixiyaa deymo shaqsiyadeed oo aan la hubin, kuwaas oo ah deyn aan baahi loo qabin dammaanad sida guri ama baabuur.
Navy Federal waxay bixisaa deyn shaqsiyeed sababo kala duwan dartood, oo ay ku jiraan dayactirka baabuurta, fasaxyada, iyo iibsashada kale ee waaweyn.
Si aad u codsato oo aad uga hesho amaah shakhsiyeed ee Navy Federal, waa inaad xubin ka noqotaa, si ka duwan ururada kale ee deynta. Waxaad codsan kartaa oo kaliya haddii aad tahay xubin milatari oo firfircoon ama mujaahid, iyo sidoo kale shaqaale Waaxda Difaaca ama hawlgab ah. Mid kasta oo ka mid ah kooxaha aan kor ku soo sheegnay xubnaha qoyskooda ayaa waliba xaq u leh.
Navy Federal waxay ku bixisaa deyn shaqsiyeed dhammaan 50-ka gobol. Waxaad ka dalban kartaa la-amaahaystaha ee Navy Federal, kaas oo laga yaabo inuu kaa caawiyo inaad hesho qiime ka wanaagsan haddii dayn-qaatahaagu leeyahay dhibco credit wanaagsan. Codsigaaga waxaad ku buuxin kartaa khadka oo waxaad ku heli kartaa qaddarkaga daqiiqado gudahood. Waa inaad ku dalbataa taleefoon ama qof ahaan haddii aad raadinayso deyn isku-darka ama amaahda hagaajinta guriga.
Xaaladaha intooda badan, waxaad heli doontaa lacagtaada isla maalinta aad ka codsato Navy Federal.
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo aad ku heli karto jawaabaha su'aalaha adeegga macaamiishaada. Waxaad la xidhiidhi kartaa adeegga macaamiisha 24 saacadood maalintii, ka soo dir fariin ammaan ah akoonkaaga bangiga internetka, ballan shakhsi ahaan ballan, la xidhiidh chatbot, dir boostada, ama isticmaal warbaahinta bulshada si aad ula xiriirto ururka.
Navy Federal waxa ay bixisaa app Google Play ah oo leh qiimaynta 4 ka mid ah 5-ta xiddigood iyo abka Apple oo leh 4.8 ka mid ah 5 xiddigood. Haddii aad rabto inaad maareyso deyntaada adigoon isticmaalin kombuyuutarkaaga, labadan doorasho waa kuwo jira.
Faa'iidooyinka Ciidanka Badda Federaalka Amaah Shaqsiyeed
l Qiimaha dulsaarka hoose: 18.00 boqolkiiba, Navy Federal Credit Union heerka boqolkiiba sannadlaha ah ee ugu sarreeya (APR) aad ayuu uga hooseeyaa kuwa kale oo badan oo amaahda amaahda shakhsi ahaaneed ah. Sababtoo ah APR-yada ururka deymaha ayaa lagu qiyaasaa 18.00 boqolkiiba, tani waa xaalad. 1 Qaar ka mid ah deyman bixiyaasha ansixiyaa macaamiisha leh credit credit waxay ku dalacayaan heerka dulsaarka sare ilaa 35.99 boqolkiiba, taas oo ku dhawaad ​​labanlaab ka badan inta ay leeyihin Ciidanka Badda.
XIDHIIDHKA: Waa Maxay Amaahda Super Jumbo? Xaddiga iyo Xadka Amaahda
Amaahyo yaryar ayaa la heli karaa: Amaahda gaarka ah ee Navy Federal waxay ka bilaabataa $250, taas oo aad uga yar dhammaan bixiyeyaasha kale ee amaahda shakhsi ahaaneed. Amaahda gaarka ah ee Navy Federal waa ikhtiyaar cajiib ah oo amaahda maalinta ah haddii aadan u baahnayn lacag tiro badan. Amaahda maalmaha shaqada waxay caadi ahaan leeyihiin kharashyo la taaban karo oo ah qaddarka amaahda yar.
Ma jiraan wax asal ah ama khidmadaha lacag-bixinta: Navy Federal ma aha amaah-bixiye shaqsi oo keliya oo aan ku dalacin khidmadahan, laakiin waa gunno fiican inaad haysato-gaar ahaan markaad tixgeliso heerka dulsaarka la dhimay.
Dib-u-dhacyada Ciidanka Badda Federaalka Amaah Shaqsiyeed
Si aad u codsatid, waa inaad buuxisaa shuruudaha soo socda ee u-qalmitaanka xubinimada:
l Waa in aad xubin ka tahay Ururka Deynta Federaalka ee Badda si aad u codsato deyn. Adiga ama xubin qoyska ka mid ah waa inaad xubin ka noqotaan ciidamada milatariga ama waax isku xidhan si aad isu qorto. Amaah-qaadeyaal badan oo suurtagal ah ayaa laga yaabaa in laga joojiyo inay codsadaan amaahda shakhsi ahaaneed ee Navy Federal sababtoo ah xaaladdan.
Ma jiro ikhtiyaar hore u-qalmitaan: Doorashada hore ee u-qalmitaanka ayaa kuu ogolaanaysa inaad hubiso haddii aad u qalanto dayn shakhsi ah adoon si xun u saamaynin dhibcahaaga deynta. Si kastaba ha ahaatee, sababtoo ah Navy Federal ma bixiso doorashadan, dhibcahaaga deynta ayaa laga yaabaa inay u dhibtoonaato natiijada dhibcaha adag ka dib markaad dalbato. Arrintan ayaa laga yaabaa inay kaa hor istaagto inaad codsato haddii aadan haysan deyn kugu filan oo ku dhow dammaanad dammaanad deyn ah.
Amaahda muddada dheer waxay leeyihiin dulsaar sare: APR-ka ugu hooseeya waa 7.49 boqolkiiba amaah ilaa 36 bilood ah. Heerka ugu hooseeya ee suurtogalka ah wuxuu kor u kacaa 14.79 boqolkiiba deymaha 37 ilaa 60 bilood. Qaar ka mid ah deyman bixiyeyaasha kale, sida LightStream, kor u kaca heerka ugu hooseeya ee deynta dhaadheer ma aha mid aad u sarreeya.
Qiimaha sare ee bixinta daahitaanka: khidmadda $29 waxay ku dhowdahay labanlaab in ka badan qaar ka mid ah deyn-bixiyeyaasha ugu waaweyn ee amaahda shakhsi ahaaneed ay ku dallacaan lacag-bixinta daahidda haba yaraatee.
Astaamaha soo socdaa waxay ka soocaan Ururka Deynta Federaalka ee Navy iyo bixiyeyaasha kale ee amaahda shakhsi ahaaneed:
Waxaa laga yaabaa inaad haysato ilaa 180 bilood inaad dib u bixiso deyntaada, iyadoo ku xiran sida aad rabto inaad u isticmaasho. Muddada ugu dheer ee laga heli karo deyn-bixiyeyaasha kale ee gaarka ah badanaa waa 84 bilood ama ka yar. Muddada dheer ee ay bixiso Navy Federal waxay keeni kartaa lacag bixin bille ah oo ka jaban inta aad ka heli lahayd deyn bixiye kale.
In kasta oo muddada daynta dheer ay keeni doonto lacag-bixin hoose oo bille ah, waxaad bixin doontaa dulsaar badan sababtoo ah APR-ka sarreeya iyo xaqiiqda ah in dulsaarku kordho muddo dheer. Si aad lacag u badbaadiso dulsaarka, dooro wakhtiga amaahda ee ugu gaaban ee aad awoodid.
Marka lagu daro codsade la codsade codsigaaga amaahda waxa ay kordhin kartaa fursadahaaga in lagu ogolaado, ama waxa ay kaa caawin kartaa in aad u qalanto dulsaar ka jaban inta aad heli lahayd. Waxaad ku dari kartaa la codsade kuwaas oo kula wadaagi doona masuuliyadaha dib u bixinta deynta adiga oo jooga Federaalka Navy.
Navy Federal waxay siisaa abka mobilada xubnaheeda kaas oo laga heli karo App Store, Google Play, iyo Amazon App Store. Waxaad maamuli kartaa akoonkaaga, bedeli kartaa macluumaadkaaga, oo aad wax ku bixin kartaa adiga oo isticmaalaya talefanka abka.
Shuruudo kala duwan ayaa saameeya in codsiga amaahda shakhsi ahaaneed la bixiyo iyo in kale. Heerarka wax-qoritaanku way kala duwan yihiin amaah-bixiye kasta, laakiin inta badan waxay ku jiraan macluumaadka diiwaanka deymaha codsadaha iyo sidoo kale walxaha kale ee ka tarjumaya awoodda dib u bixinta deynta, sida dakhliga. In kasta oo la kulma heerarka hoos ku taxan aanay dammaanad qaadin oggolaanshaha, waxay kaa caawin karaan go'aaminta in daynta shakhsi ahaaneed ay kugu habboon tahay iyo in kale.
Si aad u codsato, waa inaad xubin ka tahay NFCU. Si aad ugu biirto, adiga ama xubin qoyskaaga ah ama qoyskaaga ah waa inaad xidhiidh la leedahay militariga, Waaxda Difaaca, ama Ilaalada Qaranka. Xubnuhu waxay ka dalban karaan xubinimada onlayn.
In kasta oo NFCU aysan lahayn buundada buundooyinka ugu yar, codsadayaasha leh buundooyinka buundooyinka sare waxay leeyihiin fursad wanaagsan oo ay ugu qalmaan oo ay sugaan shuruudaha faa'iidada leh. Dhibcaha ugu yar ee 670 ayaa lagula talinayaa.
Sidoo kale, NFCU ma daaha ka qaadayso shuruudaha dakhliga ugu yar, inkastoo ay tixgeliso. NFCU waxay sidoo kale eegi doontaa taariikhdaagi bangigaagii hore iyaga, markaa abuurista xiriir iyaga ka hor inta aanad lacag amaahin waxay noqon kartaa faa'iido.
XIDHIIDHKA: Beddelka ugu Fiican ee Amaahda Hal-abuurka leh
Akhri: Amaahda gaarka ah ee American Express | Faallooyin
Waxaad yeelan kartaa la-amaahsane laakiin maaha la- saxeexe NFCU. La-amaah-qaaduhu waa qof la wadaaga mas'uuliyadda dib-u-bixinta amaahda amaahiyaha maamulaha, halka wada-saxiixayaashu ay la xisaabtamayaan oo keliya haddii deyn-bixiyuhu xumaado.
U-qalmitaanka ka hor deynta shakhsi ahaaneed, buuxinta codsiga rasmiga ah, iyo sugitaanka oggolaanshaha amaahda waa dhammaan tallaabooyinka caadiga ah ee habka. Si aad uga codsato deyn shakhsi ah NFCU, raac talaabooyinkan:
1. Buuxi foomka codsiga.
Codsiga waxaa lagu buuxin karaa onlayn ama abka ururka daynta. Waxa kale oo aad shakhsi ahaan uga codsan kartaa laanta ama telefoonka 1-888-842-6328.
2. Samir oo sug ogolaansho.
NFCU waxay dib u eegi doontaa codsigaaga waxayna go'aamin doontaa in lagu ogolaan doono iyo in kale. Dhulka dhegta u dhig haddii ay kula soo xiriiraan macluumaad dheeri ah.
3. Saxiix heshiiska amaahda.
Saxeex heshiiska haddii aad ku qanacsan tahay khidmadaha iyo shuruudaha ay bixiso NFCU. Qasab kuguma aha inaad qaadato amaahda haddii aanad ku faraxsanayn wax bixinta.
4. Hel lacagaha.
Debaajiga tooska ah, oo aad isla markiiba heli karto oggolaanshaha ka dib, waa ikhtiyaarka ugu dhakhsaha badan ee lagu heli karo lacagtaada.
5. U soo celi deynta.
Had iyo jeer ku diyaari deymahaaga lacag-bixinta si aad wax u fududaato. Weligaa ma seegi doontid lacag-bixin dambe, taasoo dhaawac u geysata deyntaada ama aad gasho kharash.
Xogta Xafiiska Better Business ee Ururka Deynta Federaalka ee Navy hadda waa mid aan la qiimeyn sababta oo ah ururka deyntu waxa uu ku jiraa habka uu uga jawaabayo cabashooyinkii hore loo xidhay. Markii hore, BBB waxay siisay shirkadda qiimeynta A+ ee kalsoonida. BBB waxay qiimeysaa kalsoonida shirkadda iyadoo eegaysa sida ay wax uga qabato cabashooyinka macaamiisha, u xayeysiiso si daacad ah, oo ay daah-furnaan uga tahay geeddi-socodkeeda ganacsi.
Ururka deymaha ayaa dhawaanahan muran ka taagnaa. Sida laga soo xigtay shaqaale ka tirsan Ciidanka Badda, deyn bixiyuhu wuxuu ku booriyay dadka wax amaahda amaahda ah inay aqbalaan amaahda xitaa marka aysan jirin sabab lagu rumaysto in deyn-qaadayaashu ay dib u bixin karaan deymaha. Dabadeed waxay gudbisay cabasho, iyadoo ku eedaysay in Navy Federal ay bedeshay shaqadeeda shaqo si ay uga aargoosato qofka sirta ah. Dabayaaqadii 2020-kii, way joojisay dacwaddii.
Haddii aad ka welwelsan tahay murankii dhawaa ee Navy Federal iyo la'aanta qiimeynta kalsoonida, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad raadsato deyn bixiye kale.
Akhri: Dib u eegista amaahda shakhsi ahaaneed ee TD Bank: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Marka ay timaado deymaha gaarka ah, NFCU maaha doorashadaada kaliya. Waa kuwan dhowr amaah-bixiyeyaal shakhsi ah oo isku mid ah iyo sida ay isu barbar dhigaan:
Urur kale oo deyn ah oo u adeega mujaahidiinta iyo shaqaalaha milatariga waa USAA. Si kastaba ha noqotee, marka la barbar dhigo NFCU, heerarkeeda amaahda ayaa cirro leh marka la barbardhigo. USAA, tusaale ahaan, waxa ay bixisa deymo shaqsiyeed oo u dhaxeeya $2,500 ilaa $20,000, laakiin NFCU waxa ay bixisa deymo u dhaxeeya $250 ilaa $50,000.
Si kastaba ha ahaatee, haddii dareenkaaga koowaad uu yahay shuruudaha deynta, ururka deymaha kuugu fiican waxaa lagu go'aamin doonaa ujeedada deyntaada. NFCU waxay bixisaa shuruudo ilaa 180 bilood ah -ama 15 sano - haddii aad rabto inaad u isticmaasho lacagta caddaanka ah mashaariicda guriga. Haddii aad lacagtaada ku bixinayso kharashyada gaarka ah ama xoojinta deynta, in kastoo, USAA waxay ku siinaysaa muddo toddobo sano ah, marka la barbardhigo shan sano oo NFCU ah.
In kasta oo PenFed loo aasaasay inay u adeegto inta badan mujaahidiinta iyo shaqaalaha milatariga, qof kasta hadda wuu ku biiri karaa. Waxay leedahay waqtiyo u dhexeeya 12 ilaa 60 bilood, taas oo u dhiganta NFCU ilaa aad rabto inaad u isticmaasho deyntaada hagaajinta guriga. NFCU waxay bixisaa shuruudo ilaa 180 bilood ah (15 sano) kiiskan.
Intaa waxaa dheer, xaddidaadaha amaahda baahiyaha gaarka ah iyo xoojinta deynta waa isbarbardhig: NFCU waxay bixisaa amaahda inta u dhaxaysa $250 iyo $50,000, halka PenFed ay bixiso deynta u dhaxaysa $600 iyo $50,000.
SoFi waxay u adeegtaa dadweynaha guud waxayna bixisaa dulsaarka ugu hooseeya iyo qaddarka deynta ugu badan ee saddexda ikhtiyaar. Amaahda shakhsi ahaaneed, tusaale ahaan, waxay u dhaxaysaa $5,000 ilaa $100,000.
SoFi sidoo kale waxay leedahay faa'iidooyin dhowr ah oo gaar ah oo aadan ka heli doonin meel kale. Waxay bixisaa barnaamijka ilaalinta shaqo la'aanta, tusaale ahaan, halkaas oo haddii lagu aqbalo, waxay gelin doontaa deyntaada dulqaad waxayna kaa caawin doontaa inaad hesho shaqo cusub.
XIDHIIDHKA: Amaahda Qaadashada Ganacsiga
Midowga Deynta Federaalka ee Navy ma daaha ka qaadayo dhibcaha ugu yar ee loo baahan yahay in lagu oggolaado daynta shakhsi ahaaneed, haddana buundada deynta sare waxay guud ahaan keeni doontaa qiime hoose.
Haddii aad u baahan tahay inaad hubiso warbixintaada deynta, waxaad ku samayn kartaa lacag la'aan annualcreditreport.com toddobaad kasta ilaa Abriil 20, 2022 mid ka mid ah saddexda xafiis ee credit ee ugu weyn. Warbixintani waxay ku siin doontaa macluumaadka ku saabsan lacag bixintaada iyo taariikhda deyntaada, laakiin maaha dhibcaha deyntaada. Baarista warbixintaada deynta waxay kaa caawin kartaa inaad ogaato dhibaatooyinka iyo aqoonsiga fursadaha horumarinta.
Bayaanka kaadhka deynta ama akoonkaaga internetka ayaa laga yaabaa inay ku siiso dhibcahaaga lacag la'aan. Hay'ad ka warbixisa deynta ayaa waliba kaa iibin karta.
Nasiib darro, ma codsan kartid deyn iyada oo aan ururka deyntu kugu samaynin jeeg credit adag. Weydiinta adag waxay siinaysaa amaah-bixiye sawir dhammaystiran oo ku saabsan taariikhda deyntaada, laakiin waxay hoos u dhigi kartaa dhibcahaaga deynta. Waxaad ka baari kartaa qiimayaasha deymaha kale adiga oo aan saameyn ku yeelan buundada deyntaada.
Lacagahaaga (ama la'aantaada) waxay ka muuqan doonaan warbixintaada deynta markaad aqbasho deynta. Lacag-bixinta joogtada ah waxay kaa caawin kartaa inaad horumariso dhibcahaaga kredit, si kastaba ha ahaatee lacag-bixinta la seegay waxay dhaawici kartaa.
Akhri: Amaahda Shaqsiyeed ee ugu Fiican oo leh Cosigner 2022
FAQs Dib u eegista Amaahda Shakhsiyeed ee Dawlada Dhexe ee Badda: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Midowga Deynta Navy ee Federaalka waa urur deyn oo federaal ah, sida uu qabo Maamulka Ururka Deynta Qaranka. Waxa ay bixisa adeegyo maaliyadeed oo kala duwan marka laga reebo deymaha.
Ma adka in aad amaah shakhsi ah ka hesho ururka deyrinta haddii credit-kaagu uu ku sugan yahay meel aad u wanaagsan. Si aad deyn uga qaadato ururka deymaha, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad xubin noqoto.
Amaahda shakhsi ahaaneed ee laga helo ururka deyrinta ayaa ah beddel wanaagsan. Ururada amaahda ayaa caan ku ah bixinta adeeg macaamiil oo heersare ah iyo in ay haystaan ​​dayn ka hooseeysa marka loo eego bixiyeyaasha internetka. Sicirka ugu sarreeya ee ururrada amaahda waxaa si la mid ah u xaddiday 18 boqolkiiba Maamulka Ururka Deynta Qaranka, si aad mid ka mid ah ku heli karto heshiis ka wanaagsan kan amaah-bixiyaha onlineka ah.
Inta ugu badan ee aad amaahan karto waxaa go'aaminaya ururka deymaha ee aad doorato inaad ka amaahato iyo sidoo kale xaaladaada maaliyadeed ee gaarka ah. Waxaad ka amaahan kartaa ilaa $50,000 ciidamada Navy Federal. Dakhli badan iyo buundada buundada, waxaad xaq u yeelan doontaa lacag badan guud ahaan. Xaddiga amaahda ugu badan ee liiskayaga ku jira ururrada deymaha ee ugu fiican ee amaahda shakhsi ahaaneed waxay u dhaxaysaa $25,000 ilaa $50,000.
Inkasta oo deynta gaarka ah ee Navy Federal loo isticmaali karo in lagu xoojiyo hadhaaga kaararka deynta ee dulsaarka sare ama deynta kale, hadda ma bixiso dib u maalgelinta deynta shakhsi ahaaneed.
Hubi inaad haysatid macluumaadka soo socda ka hor intaadan buuxin foomka khadka tooska ah:
Intee lacag ayaad u baahan tahay inaad amaahato?
Waxa aad damacsan tahay inaad ku samayso lacagaha.
Dadka firfircoon ama hawlgabka ah milatari, leh xubin qoys oo milatari ah, u shaqeeya qandaraasle Waaxda Difaaca, ama la xidhiidha xubin NFCU hadda ah waa inay ku biiraan.
Haddii aad u qalanto amaahda gaarka ah ee Navy Federal, waxay noqon kartaa ikhtiyaar kharash-ool ah. Waxay leedahay xaddi dayn oo ballaaran waxayna bixisaa amaahda hagaajinta guriga oo leh waqti dheer.
Waxaa dheer, heerarkeeda dulsaarku waa tartan, waxna kuma dalaco kharashaadka asalka, markaa ka amaahashada Midowga Deynta Federaalka ee Navy halkii deyn bixiye kale ayaa kaa badbaadin kara lacag.
Si kastaba ha ahaatee, amaahaha Navy Federal ma heli doono qof walba.
Intaa waxaa dheer, haddii aad haysato credit-ka-ka-ficis ah, waa inaad ogaataa in aysan jirin qalab u-qalmitaanka ka hor ah oo la heli karo, taas oo macnaheedu yahay ma jirto si loo go'aamiyo inaad u-qalanto deyn adigoon marka hore gudbin jeegga deynta.
Amaahda Shaqsiyeed ee ugu Wanaagsan ee Isku-Darka Deynta 2022
Bangiyada ugu Fiican ee Amaahda Shakhsiyeedka 2022
Amaahda Shakhsiyeed ee leh Cosigner 2022
Nidaamka kamarada amniga ee ugu fiican
10ka App ee ugu Orodka Wanaagsan ee Bilowga ah | 2022
Waa maxay deynta guriga? Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ogaato
Mararka qaarkood, kor u qaadista lacagta aad ku gadan karto ama ku dhisto gurigaaga riyada waxa laga yaabaa inay u ekaato mid adag laakiin leh Guri-guri...
Waa maxay Amaahda Rakibaadda Shakhsi ahaaneed? Dulmar, iyo sida ay u shaqeyso
Adeegyada amaahda looma wada sinnayn. Waxaa jira noocyo badan oo deyn ah oo la heli karo, waxaana muhiim ah in…
Amaahda Shaqsiyeed ee ugu Wanaagsan ee Dulsaarka Hoose 2022
Heerarka dulsaarka deymaha gaarka ah aad ayey u kala duwanaan karaan iyadoo ku saleysan deyn bixiyayaasha tixgelinaya iyo awooddaada amaahda. Sida laga soo xigtay…
15 Shirkadaha Dayactirka Amaahda ugu Fiican 2022
Muddo ka hor, waxaan u baahday deyn amaah guri laakiin waa la ii diiday. Bankigu wuxuu ii sheegay inaan...